14 Saa bere no ara na Herode a ɔyɛ ɔmantam sodifo no tee Yesu ho asɛm,+ 2 na ɔka kyerɛɛ ne nkoa sɛ: “Ɛyɛ Yohane Suboni. Wɔanyan no afi awufo mu, na ɛno nti na otumi yɛ ahoɔdenne no.”+ 3 Na Herode akyere Yohane agu no mpokyerɛ de no ato afiase, ne nua Filipo yere Herodia nti.+ 4 Ná Yohane ka kyerɛ no daa sɛ: “Mmara mma kwan sɛ wobɛware no.”+ 5 Ɛwom sɛ na ɔpɛ sɛ okum no de, nanso na osuro nnipa no, efisɛ na wobu Yohane sɛ odiyifo.+ 6 Na bere a wɔredi Herode awoda+ no, Herodia babea sawee wɔ ase ma ɛyɛɛ Herode fɛ yiye 7 ma ɔkaa ntam de hyɛɛ bɔ sɛ ɔbɛma no biribiara a obebisa.+ 8 Ɛnna ne maame tutu guu n’asom ma ɔkae sɛ: “Fa Yohane Suboni ti to apampaa so ma me ha yi ara.”+ 9 Ɛwom sɛ asɛm no haw ɔhene no de, nanso esiane ntam a waka ne wɔn a wɔne no tete hɔ no nti ɔhyɛe sɛ wɔmfa mma no,+ 10 na ɔsoma ma wokotwaa Yohane ti wɔ afiase. 11 Na wɔde ne ti no too apampaa so brɛɛ abeawa no, na ɔde kɔmaa ne maame.+ 12 Ɛnna n’asuafo no beyii amu no kosiei+ na wɔbɛbɔɔ Yesu amanneɛ. 13 Bere a Yesu tee asɛm no, ɔkɔtenaa ɔkorow mu fii hɔ kɔe, na ne nkutoo kɔhyɛɛ baabi komm;+ nanso nnipakuw no tee no, wofii nkurow no mu faa fam tiw no. 14 Bere a opue bae no, ohuu nnipakuw kɛse bi; wɔyɛɛ no mmɔbɔ+ na ɔsaa wɔn mu ayarefo no yare.+ 15 Nanso onwini dwoe no n’asuafo no baa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛha atew ne ho na afei ade resa; gya nnipa no kwan na ama wɔatumi akɔ nkuraa no ase akɔtɔ biribi adi.”+ 16 Nanso Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛnsɛ sɛ wɔkɔ: momma wɔn biribi nni.”+ 17 Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yenni hwee wɔ ha sɛ paanoo anum ne mpataa abien.”+ 18 Ɔkae sɛ: “Momfa mmrɛ me.” 19 Afei ɔka kyerɛɛ nnipakuw no ma wɔtenatenaa sare no so na ɔfaa paanoo anum ne mpataa abien no, na ɔhwɛɛ soro hyiraa+ paanoo no so bubuu mu kyekyɛ maa asuafo no na asuafo no nso kyekyɛ maa nnipakuw no.+ 20 Enti wɔn nyinaa didi mee, na wɔsesaw nea ɛkae wɔ ase no nkɛntɛn dumien mãmã.+ 21 Na wɔn a wodii aduan no bɛyɛ mmarima mpemnum, mmea ne mmofra nkumaa nka ho.+ 22 Afei ntɛm ara, ɔhyɛɛ n’asuafo no sɛ wɔntena ɔkorow no mu nni no kan nkɔ asuogya, na ogyaa nnipakuw no kwan ma wɔkɔe.+ 23 Afei bere a wagya nnipakuw no kwan ma wɔkɔ no, ne nkutoo kɔɔ bepɔw so kɔbɔɔ mpae.+ Ɛwom sɛ na ade asa de, nanso na ne nkutoo na ɔwɔ hɔ. 24 Saa bere yi na ɔkorow no mmɛn asase koraa, na na asorɔkye no ama nneɛma mu ayɛ den,+ efisɛ na mframa no bɔ hyia wɔn. 25 Na eduu ahemadakye* no, ɔnantew po so baa wɔn nkyɛn.+ 26 Bere a asuafo no ani bɔɔ no so sɛ ɔnam po no so no, wɔn bo tui ma wɔkae sɛ: “Ɛyɛ dae anaa?”+ Ehu ma wɔteɛteɛɛm. 27 Na ntɛm ara Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momma mo bo ntɔ mo yam, ɛyɛ me;+ munnsuro.” 28 Na Petro bua see no sɛ: “Awurade, ɛyɛ wo ampa a, ka ma memfa nsu no so mmra wo nkyɛn.” 29 Ɔkae sɛ: “Bra!” Ɛnna Petro si fii ɔkorow no mu+ nantew nsu no so de n’ani kyerɛɛ baabi a Yesu wɔ no. 30 Nanso bere a ohuu sɛnea mframa no rebɔ no ehu kaa no, na ofii ase sɛ ɔremem no, ɔteɛɛm sɛ: “Awurade, gye me!” 31 Ɛhɔ ara na ɔteɛɛ ne nsa, na Yesu soo no mu ka kyerɛɛ no sɛ: “Wo a wo gyidi sua, dɛn nti na womaa w’adwene hinhimii?”+ 32 Bere a wɔforo tenaa ɔkorow no mu no, mframa no gyaee. 33 Afei wɔn a wɔwɔ ɔkorow no mu no kotow no kae sɛ: “Woyɛ Onyankopɔn Ba ampa.”+ 34 Na wotwa baa Genesaret asase so.+ 35 Bere a wohuu no no, mmarima a wɔwɔ hɔ no soma kɔɔ nkurow a atwa ahyia nyinaa mu, na nkurɔfo de ayarefo nyinaa brɛɛ no.+ 36 Na wɔpaa no kyɛw sɛ ɔmma wɔmfa wɔn nsa nka n’atade nguguso ano kɛkɛ;+ wɔn a wɔde wɔn nsa kae nyinaa ho tɔɔ wɔn koraa.